Xildhibaanada Golaha Shacabka oo aragtiyo kala duwan soo gudbiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo aragtiyo kala duwan soo gudbiyay
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay kahor fadhiga maanta ee Covid-19 looga hadli doono!
MUQDISHO, Soomaaliya - Xarunta Golaha Shacabka ee Villa Hargeysa waxaa soo buux dhaafiyay Xildhibaanadii golaha intooda badan, wararka aan heleyno waxay sheegayaan in doodda oo aan weli billaaban ay xildhibaanadu si toos ah iyo si gaar-gaar ahba ula hadlayaan warbaahinta ku sugan xarunta Baarlamanka ee shirku ka furmi doono wax yar kaddib.
Ajandaha Shirka ayaa lagu sheegay Caabuqa Covid-19, waxaana xildhibaanada loo sheegay in ay soo xaadiraan fadhiga maanta oo billaabanaya 9:00 subaxnimo, weli ma buuxsamin kooramkii, guddoomiye Mursal iyo labadiisii ku xigeena sooma galin, waxaana la gaaray xilligii salaadda Duhur, xildhibaanada qaar ayaa salaad u baxay halka qaar kalena ay fadhiyaan kuraasta.
Warbaahinta ayey la hadleen xildhibaanada qaar, Xildhibaanad ahna Wasiirka Gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ka hadashay dhankeeda tuhunka la sheegay inuu jiro maanta kaasoo la xiriira muddo kororsiga, waxayna diidday in ay ka hor dhacdo Ajandaha kulanka iyo Guddoomiye Mursal oo lagu wado inuu soo galo goor dhaw. Xildhibaaad Khadiija ayaa waxay usoo jeedisay Xildhibaanada Mucaaradka ee soo xadiray fadhiga kuwaasoo aan saxiixin buugga is diiwaan gelinta, iyadoo ku tilmaantay in ay fowdo ka wadaan, "Fadhiga ayey yimaadeen, mana saxiixin waxaan u aragnaa in ay tahay fowdo" ayey tiri Wasiir Khadiija.
Xildhibaan Xasan Firimbi ayaa isna tilmaamay ujeedada ku hoos qarsoon fadhiga maanta ee Golaha Shacabka, waxa uuna eed u jeediyay guddoonka Baarlamanka iyo madaxweyne Farmaajo, waxa uuna uga digay muddo kororsi, waxa uu tilmaamay in ciidankii Koofiyad Gaduudda ee madaxtooyada iyo dhar-cadkii Fahad Yaasin la soo dhoobay dhinacyada xarunta ay ku shirsan yihiin xildhibaanada.
Xildibaan Mahad Salaad ayaa isna eed dusha kaga tuuray Fahad Yaasiin oo ciidamo sidii maleeshiyaadkii ulabisan soo tubay illinka hore ee Villa Hargeysa, waxa uuna tilmaamay sidoo kale in dalab ka yimid Mursal dartii loo keenay ciidamada uu ku sheegay maleeshiyaadka xarunta Villa Hargeysa.
Inta badan xildhibaanada muxaafidka ah ee la safan Farmaajo, jecelna in ay heleen muddo kororsiga wey ka gaabsanayaan kulanka, waxayna leeyihiin dhammaantood haddii loo baahdo wax dalkan lagu samata-bixin karo Xildhibaanada Golaha Shacabka waajib ayaa ka saaran, waa hay'adda ugu sarreysa ee Sharciyadda, xaq ayey u leedahay in ay keenaan masiir umadda Soomaaliyeed lagu badbaadin karo, oo ay ula jeedaan muddo kororsigu haddii ay dan u tahay umadda Soomaaliyeed waa la sameen doonaa!
Wixii wara ee kusoo kordha fadhiga maanta waan idiin soo gudbin doonaa haddii uu Alle noo ogolaado.